ကလေးပြန်လာခဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ် Kubuntu, မင်္ဂလာပါ Debian | Linux မှ
ကလေးပြန်လာခဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ် Kubuntu, မင်္ဂလာပါ Debian
တစ်ပတ်မပြည့်ခင်ကျွန်တော့်ကိုကျော်သွားခဲ့တယ် Kubuntu အလုပ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသည်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ရိုးရှင်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည် KDE ၄.၉ ဒါကြောင့်နှင့်အတူရှိခဲ့သည့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းဖုံးကွယ်မထားဘူး Debian KDE.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ developer များဆီကိုအစီရင်ခံစာပို့ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီးသူကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူသည့်အခါပြနာကစတင်ခဲ့သည် အမွေပေးပါ။ ငါဘာမှထွက်သွား။ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအဆုံးသတ်လိမ့်မယ် နဂါးကစားသမား (ဥပမာ)နှင့် Boom !!! နည်းနည်းမက်ဆေ့ခ်ျကို .. အပေါင်းတို့နှင့် applications များနှင့်အတူ။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပို့စ်တစ်ခုတွင်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်၊ သို့သော်မြစ်အသံထွက်လာသောအခါပေါ်လာလိမ့်မည်။
ရုတ်တရက်သတိပေးချက်များသည် panel မှပျောက်ကွယ်သွားပြီး screen ၏ဘယ်ဘက်အထက်ပိုင်းသို့သွားခဲ့သည်။ တချို့က applications များဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. အပြေးမခံခဲ့ရပါ။ ဒါကြောင့်မနေ့ညကကျွန်တော်တိုတောင်းပြီးမပျင်းဘူး Debian စစ်ဆေးခြင်း.
ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူး Kubuntu o KDEပထမဖြစ်ရပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအတွက်ဘယ်ဟာကမှအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါဝတ်ထားဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ကြပါတယ် PPA တစ်ဗားရှင်းအကြောင်း Kubuntu အရာသည်၎င်း၏ဗားရှင်းနှင့်အတူအခြားကွန်ပျူတာများတွင်တည်ငြိမ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် KDE လက်ရှိ
ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကတော့ငါအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီ၊ ငါနင်နေတဲ့နေရာကောင်းတယ် .. ငါ့ Desktop ကအခုချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ် .. စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်ငါသုံးနေတဲ့ Plasma theme ကတော့ တော့ openSUSE နှင့်နောက်ခံ၏နောက်ခံပုံပိုင် မူလတန်း Luna.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, KDE ၄.၉ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံသဏ္inာန်အတွက်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ သော်လည်း debian ငါအသုံးပြုနိုင်ရန်အချိန်အကြာကြီးစောင့်ရလိမ့်မည်၊ စောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်၊ ဤမူကွဲလည်းဖြစ်သည် (၁၃.၀၄) မတော်ပါဘူး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ကလေးပြန်လာခဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ် Kubuntu, မင်္ဂလာပါ Debian
ဒါဟာ Debian ကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ Linux အတွက်အသစ်တစ်ခုပါ။ KDE (သို့) တခြား interfaces တွေဘယ်လို install ရမလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ထပ်ပြောရရင် Debian ဟာ KDE နဲ့ကြီးတယ်။ လေးစားပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်။ Debian Wheezy + KDE 4.8.x: တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း..
အဲဒီဆောင်းပါးမှာ KDE အနည်းဆုံးဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်။ ဒါပေမယ့် meta-package ကို install လုပ်ဖို့သင့်ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။ kde- အပြည့်အဝ 😀
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ VBox တွင်ထည့်သွင်းရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ pc ၏ bios များသည်မည်သည့် linux ကိုမှမပံ့ပိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ tut အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးနောက်ခံပုံရဲ့လင့်ခ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ထပ်မံနှုတ်ဆက်ပါ😀
Debian ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်→“ ISO CD images” ကိုရှာဖွေရန်ဥပမာ medium download →“ Debian CD / DVD ပုံရိပ်များကို HTTP / FTP မှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ” ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ် CD လား DVD လားရွေးပါ။ ယခု i386 သို့မဟုတ် amd64 ပလက်ဖောင်းကိုရရှိနိုင်သော iso အတွင်း→→“ debian-6.0.6-amd64-kde-CD-1.iso” ကိုရွေးပါ။
default အနေနဲ့ Debian က KDE နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံကိုသုံးဖို့အကြံပေးလိုတယ်။
6-bit Debian 32:
6-bit Debian 64:
7-bit Debian 32:
7-bit Debian 64:
debain testing KDE နဲ့စတာပါ။ PClinuxOS ကပါ။ ငါပျော်တယ်၊ အရာအားလုံးကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်အောင်စီမံထားတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုစိတ်ကျေနပ်စေခဲ့တယ်။ ငါ Linux ကိုနှစ်အနည်းငယ်ကတည်းကသုံးခဲ့ပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဘူး။ ငါ Debian နဲ့အချိန်အတော်ကြာနေမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးမှတ်ချက် ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်ဂုဏ်ပြုလွှာ, ကဖတ်ရှုခြင်းမှပျော်မွေ့သည်။
အားဖြင့်ရပ်တန့်ပြီးမှတ်ချက်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင် Debian ၌သင်ကျေနပ်မှုရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ 🙂
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် Thanks ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အမှန်စင်စစ် Debian Testing ၏တည်ငြိမ်မှု (လက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအချို့တွင်ထည့်သွင်းထားခြင်း) သည်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် KDE သည်အလွန်နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသည်။
PC-BSD … hehehe ကို install လုပ်ဖို့စောင့်နေတယ်
မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါငါပြောမယ်၊ ငါတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ .. မင်းဟာ Debian ကိုတစ်လမပြည့်ခင်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် BSD စနစ်များ၊ ipfw၊ Bash မှလွဲ၍ အခြားအရာများကိုသုံးရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။ (haha ကိုလွမ်းလိမ့်မည်ကိုသိသော်လည်း) စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါ BSD အကြောင်းလေ့လာလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖမ်းယူထားသည်🙂
PC-BSD သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မည်သို့ဖော်ပြထားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် PC-BSD သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုးတွင်ပရိုဂရမ်များကိုမည်သို့တပ်ဆင်သည်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
pbi သည်အရာအားလုံး (မှီခိုမှုများကို) ယူဆောင်လာပြီး၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်သာအလေးချိန်ရှိသည်။
သူတို့ကတိကျတဲ့လမ်းညွှန်ထဲမှာတောင်ထည့်သွင်းထားတယ် (ငါထင်တယ် / usr / Programs /) ။
bash အတွက်တော့ tcsh or sh ကိုသုံးဖို့ဒါမှမဟုတ် bash ကို install လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ငါ FreeBSD use ကိုသုံးတယ်
ဘာလို့ Debian GNU / kFreeBSD ကိုကြိုးစားရှာဖွေပြီးဘယ်လိုအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြောပြမလဲ? [မလိုတမာအပြုံးများ]
"Debian" ဆိုသောအပိုင်းအတွက် ...
သင့်တွင်ဒီ repository ကပိုလတ်တလော kde ဗားရှင်းရှိရန် (၄.၁၀ မဟုတ်ပဲ ၄.၉.၅) မဟုတ်
ကလေးပြန်လာပါ !! နှုတ်ဆက်ပါတယ် Kubuntu မင်္ဂလာပါ Debian >>> အဲလိုဖြစ်သွားတယ်။
ကလေးပြန်လာပါ !! နှုတ်ဆက်ပါတယ် Debian, မင်္ဂလာပါ Fedora >>> ဒီဟာကျွန်တော့်အတွက်ပါ။
ကလေးပြန်လာပါ !! နှုတ်ဆက်ပါတယ် Debian မင်္ဂလာပါ Fedora >>> ဒီဟာက Garbage_Killer ပါ။
ကလေးပြန်လာခဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ် Fedora, မင်္ဂလာပါ Arch >>> ဒီအဖြစ်အပျက်ကငါ့ကိုဖြစ်ပျက် .... XD !!!
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ ကျွန်ုပ်သည် Debian ကိုအကြိမ်များစွာတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း Wi-Fi မှတစ်ဆင့်မည်သို့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောရင် ...
ဒါပေမယ့်ပြtheနာက Wi-Fi ဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိတာဒါမှမဟုတ် Debian မဆက်သွယ်တာလား။
Wi-Fi ကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူး၊ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တာကကေဘယ်လ်ကြိုးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့နှောင့်ယှက်တာကြောင့်ပါ။
ကြည့်ကျတာပေါ့။ အကယ်၍ ဖြန့်ဖြူးမှု (ဤကိစ္စတွင် Debian) ၌သင်၏ Wi-Fi ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် firmware တပ်ဆင်ထားပြီးပါက၎င်းကို NetworkManager သို့မဟုတ် Wicd ကို အသုံးပြု၍ အလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရမည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်
အိုကေကျေးဇူးတင်ပါတယ် Debian ကိုထပ်မံတပ်ဆင်သောအခါ NetworkManager ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။ နောက်တစ်ခု၊ Debian7ထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းသိလား။
အားလုံးမတ်လအားဖြင့်ကောင်းစွာ (နှင့်မျှော်လင့်နိုင်အောင်) သွားလျှင်။
ခင်ဗျားဟာတစ်လဒါမှမဟုတ်အများဆုံးနှစ်လလောက်ကြာလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမင်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်၊ xd
ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့၊ Kubuntu ကိုမထည့်သွင်းမီ Debian ကို KDE နှင့်လပေါင်းများစွာ install လုပ်ခဲ့သည်။
လပေါင်းများစွာ ... ဒါကနေမကောင်းသစ္စာဟုခေါ်သည်။
အမှန်တရားကဒီဟာကပိုကြာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Debian မှာလူတွေကိုကြာရှည်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်။ ငါ Ubuntu ကိုနောက်တစ်ခေါက် ((လတ်တလော Gnome shell) ရှိဖို့) ငါ Debian Testing မှာ ၈ လကြာခဲ့တယ်။ ဒီဌာနခွဲမဖွင့်ခင်တုန်းကငါ Debian ကိုပြန်သွားပြီး software version တွေထပ်မံမွမ်းမံတော့မယ်။
ငါ Debian ကိုအမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိတယ်။ ငါကအခြားအရာတွေကိုအမြဲကြိုးစားပြီးပြန်လာတတ်တယ်။ အမြဲတမ်း😀
မင်းက Kubuntu ကိုနှစ်ရှည်လများချီးမွမ်းခဲ့တာကိုငါအံ့သြသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာမှမပြောခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကယာယီတောက်ပနေတယ်၊ ​​နောက်မှမဟုတ်ရင်မင်းဟာဟာဟဟ၊
Hmmmmm၊ ငါ Debian ကိုနည်းနည်းပဲစမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အများစုက virtual machine မှာ။ ၎င်းတွင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်သယံဇာတသုံးစွဲမှုနည်းပါးသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင် package ကို manager အနေဖြင့် pacman အစား apt-get အစား pacman ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြီးမားသောအပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ super- အေးစက်နေတဲ့အချက်ဖြန့်ချိဖြစ်ခြင်းအပြင်။ အမှန်တရားကနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုငါပေးမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာအရင်က Ubuntu Xfce နဲ့အတူငါအရင်က Ubuntu Xfce မှာအောက်ကပျဉ်ပြားတစ်ခုနဲ့အပေါ်က ၂၆ ပေအကွာအဝေးရှိတဲ့ထုံးစံအတိုင်းမှတ်မိနိုင်ပေမယ့်အလွန်ရုပ်ဆိုးတဲ့ Xfce desktop (စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းမတိုင်မီ) ရှိလို့ပဲ။ GIMP မှာလုပ်ထားတဲ့ထုံးစံ gradient ကို။ Ahhh, ထိုကာလခဲ့ကြသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် KDE နဲ့အလွန်ခေတ်မီတဲ့ Archlinux ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ငါလွမ်းဆွတ်မှုခံစားရတယ်။ ချစ်သူကြွက်ကိုရုတ်တရက်စွန့်ပစ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးရွှင်လန်းစေခဲ့တယ်။
၎င်းကိုအသုံးပြုသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ထံပို့ခဲ့သည် တော့ openSUSEဒီလင့်ခ်မှကူးယူနိုင်သည်။
ဂုဏ်ယူပါတယ် elav, ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်။
wheezy ကိုလွှတ်ရန်ထွက်ခွာသည့် bug များကိုတွေ့နိုင်သည်။
အချို့သောအမှားအယွင်းများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်မိုက်မဲပုံရသည် .. သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ .. အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Intel Pentium G620 2.6 Mhz dual-core ပရိုဆက်ဆာပါသည့် Ram တွင် 2GB of Ram ပါ ၀ င်သော Wheezy + KDE သည်ကောင်းမွန်ပါသည်။
Uff .. မင်းကျန်နေသေးတယ် .. 😀
ခင်ဗျားဘယ် icon တွေကိုသုံးနေတာလဲ။ သူတို့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်။
Buenos Aires မှလူများသည် KDE 4.10 နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုကြသည်။
Kubuntu 12.10 တွင်။ နေရာတိုင်းမှာအမှားအယွင်းတွေရတယ်၊ အသုံးမပြုနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေ၊ အမှားနည်းတဲ့နိမိတ်တွေပေါ်လာတယ်၊ shutdown, logout၊ ဘေးအန္တရာယ်တခုဖြစ်တယ်။ ယခင်ဗားရှင်းသည် ၄.၉၈ ဖြစ်ပြီး ၁၀ ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ယခင်ဗားရှင်းသို့မည်သို့သွားရန်သို့မဟုတ်သက်ဝင်နောက်ခံမပါသည့်လက်ရှိဗားရှင်းကိုမည်သူကမဆိုသိရန်မည်သူမဆိုသိလား။
နောက်ပြန်လှည့်တော့မသိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းက Backport PPA ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်သံသယရှိတယ်။
အဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကြည့်ပါ၊ ငါ Backport PPA ကိုသုံးပါ နောက်ပြန်မလှည့်ပါကပြunderstandingနာကိုသင်၏နားလည်မှုတွင်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီကံမကောင်းသေးဘူးအခုအဖြေတစ်ခုစဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်မှာ apt cache ထဲမှာ package အဟောင်းတွေရှိခဲ့ရင် downgrade လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာ ၁၀၀% ကျေနပ်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ comming အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ Kubuntu 12.10 64 bits ကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ရုံး၌ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသကဲ့သို့ !!!! ။ တစ် ဦး ကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရာအားလုံးကိုပြန်လည်သင့်တယ် !!!!
ppa, uninstalled kubuntu-desktop ကိုဖယ်ရှားပြီး repos တွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရသည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် KDE 4.8 သို့ပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာအားလုံးကိုပြန်သွားပါမည်။ သင်အလိုရှိသည်မှာ KDE 4.9 သို့ပြန်သွားရန်လားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ရုံ ppa ရှင်းလင်းမှုကိုသုံးပါ။
ငါကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Ramon Luis ဟုသူကပြောသည်
အလွန်လွယ်ကူသော OiaO27: Chakra 2013.02“ Benz” ကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါ။ စင်ကြယ်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ KDE အတွေ့အကြုံ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်တော့အလွန်တည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်
Ramón Luis ကိုပြန်ပြောပါ
Gara_ ညနေ ဟုသူကပြောသည်
ငါတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် kde နှင့် distro သည် chakra ဖြစ်ပြီးပရိုဂရမ်အမြောက်အများရှိခြင်းသည် pacman နှင့် ccr တို့တွင်၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ပြီးစနစ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲဖြစ်သည်။ သင့်တွင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောပုစွန်များ (Linux ပေါ် RAD) ရှိသည်။
PC-BSD နှင့်အနာဂတ်အတွက်၎င်း၏အစီအစဉ်များ။ ဟုသူကပြောသည်
FreeBSD ၏ desktop version ဖြစ်သော PC-BSD သည်ယခုနှစ်တွင်“ လှိမ့်ကျသော distro” ဖြစ်လာလိမ့်မည် (Linux လောကမှသိသည်အတိုင်း၎င်းသည်သင့်လျော်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုကိုးကားချက်များထည့်သွင်းထားသည်) ။
ပြီးခဲ့သည့်ညကဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်၏ G + အကောင့်ထဲတွင်ထားခဲ့ပါ၊ သို့သော်အိပ်နေသောသူများနှင့်အင်္ဂလိပ်ပြwithနာရှိသူများအတွက်ယခုနှင့်ဤတွင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးပါမည်။
အဲဒီမှာ Kris ကကျွန်တော်တို့ကို pkgng ကှကျစနစ်အသစ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ PBI parcel စနစ်တစ်ခုလုံး pkgng သို့သွားမယ် ထို့အပြင်၎င်းသည် operating system အဆင့်တွင် binary level တွင် system updates များကိုကိုင်တွယ်ရန် "freebsd-update" utility ကိုအသုံးပြုသည်သာမက -RELEASE, -STABLE နှင့် -CURRENT အတွက်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ဒါကကိစ္စမဟုတ်ပါ။ PC-BSD အားလုံးသည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးအဆောင်များ၊ helpBSs, scripts စသည်တို့ကို FreeBSD port များ၌လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ FreeBSD ကိုလည်းသင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီးယခုအချိန်တွင် PC-BSD ပေါ်တွင်အခြေခံထားသော desktop ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဒီအပြောင်းအလဲတွေအားလုံးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ports မှာ KDE version အသစ်ပေါ်လာရင်ချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ bache fix ကြောင့် apache version တွင် update ရှိလျှင်၎င်းသည်ချက်ချင်းရရှိနိုင်သည်။ စသည်တို့ - -RELEASE ဌာနခွဲတွင် PC-BSD / FreeBSD စနစ်ရှိရုံသာမကသင် - ကုဒ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးစနစ်ကိုပြန်လည်စုစည်းစရာမလိုပဲ -STABLE တွင်လည်း၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခြင်း !!
ဒီအရာအားလုံး, အမှန်တရား, ငါ့ကိုဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုနောက်ဆုံးညဥ့်ထားတော်မူ၏။ အိပ်ရတာနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်တွန့်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်၊
ယခုနှစ် ၂၀၁၃ သည် FreeBSD / PC-BSD ကမ္ဘာအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည်
PC ကို -BSD ရုံယူတာပဲ။
အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး BSD desktop တစ်ခုရရှိရန် FreeBSD (သို့မဟုတ်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ArchBSD) ကိုတပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကိုထည့်ပါ။
နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ FreeBSD သည်လှိမ့်ချလွှတ်လိုက်သော release_ ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ“ တည်ငြိမ်သော” လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်များသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသစ်ပင်ရှိအချိန်ကာလတစ်ခု၏လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်သည်။ FreeBSD ကိုတစ်ချိန်ကထည့်သွင်းပြီး ၆ လမှ ၈ လတိုင်းသို့မဟုတ် ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇ နှစ်တိုင်းတိုင်းမရွိမွမ်းမံမှုများမလိုအပ်ဘဲတစ်ချိန်တည်းတွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
ငါပြောတာကငါ Kubuntu ကိုလပေါင်းများစွာသုံးပြီးငါ့ကိုအမှားတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဗားရှင်းက ၁၂.၀၄ ဖြစ်တယ်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်သည် KDE 12.04 ဖြင့် version 12.10 ကို သုံး၍ ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် application များ၌အမှားတစ်ခုမျှမတွေ့ရပါ။ Crossover (SPSS) နှင့်အသုံးပြုသောအချို့ application များ၌ပင်မိခင်ဘာသာစကားနှင့်မတူပါ။ ငါလုံးဝမပြီးဆုံးသေးသည့်ဆောင်ပုဒ် Bespin ကိုအသုံးပြုသည်သာမကကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာများမရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကံကောင်းသည်ဟုထင်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်မှာ Kernel 3.7 ကို install လုပ်ထားလို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့် Laptop ပေါ်မှ Kernel 3.5 သည်ပြproblemsနာများစွာဖြစ်စေခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် system ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်မိသောကြောင့်၎င်းသည် Kubuntu ပြproblemနာဟုထင်ပြီးအခြားတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာ Kernel 1 ရှိခဲ့သည့်ဖြန့်ဝေမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တူညီသောပြproblemနာရှိသည်။ ဒီ kernel ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ laptop ကိုလုံးဝပိတ်ထားလို့မရဘူး၊ နောက်တစ်ခါပြန်စတဲ့အခါ Grub ကို load လုပ်ပြီးမျက်နှာပြင်ဟာကွက်လပ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီကနေ ၂ ဒါမှမဟုတ် ၃ ခလုတ်နှိပ်ပြီးတဲ့အထိမဖြစ်သွားပါဘူး။ ဓာတ်ပြုပါသည်။
အဖြေတစ်ခုကိုအွန်လိုင်းရှာဖွေပြီးနောက်၊ ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ (ကျွန်ုပ်သည်ဤအားနည်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုတည်းသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) မရှိ၍ Kernel 3.6 ကိုလွှတ်ခဲ့ပြီးစိတ်ပျက်မိသောအခါ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင် "ကျနော့် system ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားကြည့်ရအောင်" နဲ့၊ အံ့ surprise စရာကောင်းတာကငါ boot boot မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ Kernel 3.7.6 နဲ့အခုထိငါပြproblemနာအနည်းဆုံးမရှိဘူး၊ ငါ့ system အတော်လေးကောင်းစွာနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်း။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုခုရှိခြင်းကြောင့်အချို့သောအနှောင့်အယှက်များဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ဖြန့်ဖြူးမှုကသူ့ထက် Hardware နဲ့ပိုတူတယ်ထင်တယ်။ ဒါကငါ့နှိမ့်ချအမြင်။
ဒီနေရာမှာငါ့ရဲ့ desktop မျက်နှာပြင်ရဲ့ပုံ။
ပြianနာက Debian Testing နဲ့ Ubuntu 12.04 အတွက်ငါဆိုင်မှာပဲရှိနေတယ်။ 12.10 ကိုမထည့်သွင်းတော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်သူကကြက်တွန်တာထက်နည်းနေသေးတယ်။
Kubuntu 12.10 64 bits ကို Kernel 3.7 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပုံကိုသိလို။ စိတ်ဝင်စားသည်။ သငျသညျရှင်းပြဖို့ကြင်နာအလုံအလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Buenos Aires မှအာဂျင်တီးနားမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Osky
မင်္ဂလာပါအိုai Kernel 3.7.8 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
သင်၏ကိရိယာနှင့် application များသည် Kernel အသစ်နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသေချာပြီးသောအခါ Headers အပါအ ၀ င် Kernel အဟောင်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် Google-Earth ကကျွန်ုပ်ကိုအမှားတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် Header အဟောင်းကို uninstall လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အဲဒါကိုငါပြုပြင်ခဲ့တယ်။
ထည့်သွင်းထားသော kernel များကိုကြည့်ရန်
sudo dpkg -l | ဖြစ်သည် grep linux-image ကို
sudo dpkg -l | grep linux-header ကို
နှစ်ခုလုံးကို uninstall လုပ်ရန်
sudo apt-get ဖယ်ရှားရန် –purge linux-image-XXX
sudo apt-get ဖယ်ရှားရန် –purge inux-headers-XXX
အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါတယ်၊ Buenos Aires မှပွေ့ဖက်။ Osky
SPSS ကို crossover အောက်မှာ run ဖို့စီမံထားသလား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ SPSS ဘယ် version ကိုသိနိုင်မလဲ?
ဤရွေ့ကား Kubuntu 12.10 တွင်ကျွန်ုပ် install လုပ်သော SPSS application များဖြစ်သည်။
ဤအရာများသည် Crossover 11.3.1 နှင့်အလုပ်လုပ်ကြပြီးသင့်အားငါပြောသည်မှာလျှောက်လွှာအတွင်းရှိဒေတာဘေ့စ်များသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါယနေ့အထိကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ဗားရှင်း ၄.၅ ဖြစ်ပြီးခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုများအတွက်အတော်လေးအလုပ်လုပ်တဲ့။
သိလိုသည်မှာ Windows 8 တွင် Win7နှင့် XP ကိုသာ သုံး၍ မရပါ။
Debian ကိုပြန်သွားတာကောင်းပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ubuntu နဲ့အတူတစ်ခါတစ်ရံမှာ lts (နှင့် server ဌာနခွဲ မှလွဲ၍) မှလွဲ၍ ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ Debian မှာပြproblemနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်များ၊ အလိုရှိတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ အများကြီးများနှင့်တ ဦး တည်းကဖို့အသုံးပြုတာသို့မဟုတ်ကွဲ။
သင်တည်ငြိမ်မှုကနေထွက်ပြီးတက်သွားပြီးအရာအနည်းငယ်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပျက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် packets တွေမြန်မြန်ရွေ့လျားရင်တောင်နှေးနေတုန်းပဲ (code patching ကကောင်းတဲ့မူဝါဒပဲ) ။ ဒါ့အပြင်လူတွေဟာသူတို့ကိုတည်ငြိမ်မှုကိုနည်းနည်းလောက်ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုမှာ Debian4ကိုတွေ့နိုင်တယ်။
အိမ်မှာကျွန်ုပ်မှာ Debian ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု + ကူးယူမှုအတွက်ပြေးနေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာလွှမ်းမိုးနေဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ Arch ကိုငါပြောင်းရွှေ့နေတယ်။ (အဆင့်လျှော့ချနည်းကပိုပြီးလွယ်ကူတယ်၊ ငါပြောနိုင်တယ်။ ubuntu with နှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို install လုပ်စရာမလိုဘဲနှင့် unity ကိုအသုံးပြုပါ။ (bsd (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တွင်အိမ်တွင် firewall ရှိသည်) ရှိသည်။
အားဖြင့်ရပ်တန့်ပြီးမှတ်ချက်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောအရာများရရှိရန်စိတ်ပျက်အားလျော့သည်မှန်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၌တည်ငြိမ်မှုနှင့် (ဤအချက်သည်ခံစားချက်) ကျွန်ုပ်၌မည်သည့်အရာအတွက်မျှမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ အခြား distro များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နည်းနည်းဟောင်းနေသော်လည်းဤဗားရှင်း ၄.၈ သည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်သည်။
အရမ်းကောင်းတယ်၊ debian မှာသင့်ကိုပြန်လာအောင်လုပ်တယ်။ debian testing + KDE လည်းရှိတယ်။ KDE နဲ့ Oxygen Effects တွေကိုကြိုက်တယ်။
Air သည် KDE 4.10 တွင်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်းမှာနည်းနည်းမျှသာရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ မှောင်မိုက်သောအရောင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်း .. ပျော်မွေ့ရန်😀
နောက်ဆုံးတော့ငါ openSUSE KDE ကိုလည်းထားခဲ့ပြီး၊ အလွန်ကောင်းသော distro တစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီး Debian Wheezy သို့ပြန်သွားသည်။ Debian ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်သွက်လက်မှုသည် RHEL (သို့) CentOS များနှင့်သာနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့တွင် "ဟောင်းနွမ်းသော" အထုပ်ရှိသည်။ လူတစ်ယောက်သည် Debian တွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသူလုပ်ချင်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်နှင့်သူသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ၎င်းသည် Debian ၏လက်မှထွက်ရန်ခက်ခဲသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါပြန်လာခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး distro :-) ။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့စားပွဲခုံမှ PrtSc ထားခဲ့ပါ ..
ချစ်ခင်ရပါသော @elav, OpenSUSE ကိုခွင့်ပြုသင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရဗားရှင်းစာတန်းများနှင့်မသင့်တော်ပါ။ ပထမတော့၎င်းသည်သင့်အတွက်အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်ပြီး distro ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအခိုင်မာဆုံးနှင့်တည်ငြိမ်သော kde ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည် Debian ကဲ့သို့ထပ်တူထပ်မျှပြောရန်တိုက်တွန်းခံရသော်လည်း ပို၍ အဆင့်မြင့်သည်) ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်သော Debian ထံမှရေးသားခြင်းနှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းခွင်၌ Crunchbang Waldorf (debian စစ်ဆေးခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍) ကို install လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းစဉ်းစားရသော်လည်း Windows Seven ကိုကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်တွင်ထားခဲ့သည့်နေ့တွင်၎င်းသည်မရှိသေးကြောင်းဝန်ခံရပါမည်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်အကြောင်းပြချက်များရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် OpenSUSE kde ကိုသေချာစွာတပ်ဆင်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံး kde ဗားရှင်းများ၏ repositories သည်ဤ distro တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းသည်၎င်း၏ပြtenနာ ၁၀,၀၀၀ ရှိသည့်၎င်း၏ PACKAGEKIT ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံရသော Yast2 ၏လေးလံမှုတို့မှ စတင်၍ အခိုင်မာဆုံးသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းမဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံး KDE SC သည် Arch Linux 64-bit, period ဖြစ်သည်။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသဘောမတူဘူး Arch သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်၊ အတွေ့အကြုံအလုံအလောက်ရှိသော၊ ပုံဖော်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရသာကိုချန်ထားနိုင်သူဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်အသုံးပြုသူများအတွက် (အသစ်စက်စက်မဟုတ်သူများ) အတွက်၊ မည်သည့် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ Arch သည်ဘယ်သောအခါမျှတရားဝင်ရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့မသိ / ရိုးရှင်းစွာတပ်ဆင်နိုင်လိမ့်မည်ဆိုလျှင်ရိုးရှင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။
ကျွန်ုပ်သည်ဆယ် ၁၃ နှစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ OpenSuse ကိုနှိပ်လျှင်အကောင်းဆုံး KDE SC သည် Chakra 2012.03 ဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားသည်က၎င်းသည် _for me အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုထက်မကပါ
မင်း tr trolled ခဲ့ကြသည်
အားလုံးကြိုးစားပြီး၊ ပြောလိုက်သည်… xD ဖြန့်ဝေမှုများအားလုံးသည်ငါသည် Kubuntu သည်အကောင်းဆုံး distro ဖြစ်သည်ဟုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ version 12.04 ဟာပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါ့အတွေ့အကြုံအရနောက်ဆုံး kde version သည်လာမယ့် version ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အဲဒီအမှားတွေဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထွက်လာတိုင်းကျွန်ုပ်အမှားပဲ။ အရာရာကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုထဲသို့ထည့်သွင်းပြီးလူတိုင်းဝမ်းသာကြပါတယ်။ တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အကြာတွင်လူများနှင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့၏ windows များကိုမစတင်ချင်တော့ပါ။ kubuntu သည်ယခုလမ်းကြောင်းအတိုင်း bluesystem၊ အလွန်ကောင်းသောဘလော့ဂ်ဖြင့်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းအမှားများသည်စနစ်ကိုအလွန်အမင်းထိတွေ့ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါလော။ xD နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
လူတိုင်းသည်မိမိရွေးချယ်သောအကန့်အသတ်ဖြင့်သာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည် Slackware နှင့် Debian ကဲ့သို့သောဟောင်းကျောင်းဟောင်း operating system များအပေါ်တွင်မှီခိုနေကြသည်။
Ubuntu 12.04 တွင်အဆက်မပြတ် crash သတင်းပေးပို့ခြင်းကိုပိတ်ပါ
အော်ပရာ Presto မှထွက်ခွာပြီး Webkit သို့သွားသည်